Ariuslọ akwụkwọ sayensị Unarius - WRSP
Ndị Ntọala: Ernest L. Norman (1904-1971), aka Archangel Raphiel na Ruth E. Norman (1900-1993), aka Onye Ọchịchị Uriel
Ebe amụrụ onye: Uriel mụrụ na Indianapolis, Indiana. Amaghi ebe amuru Raphiel.
Ebe omuma Unarius: Los Angeles na 1954
Onye isi ugbu a: Charles Louis Spiegel, aka Antares (Mmelite: Spiegel nwụrụ na Dec 22, 1999)
Ederede dị nsọ ma ọ bụ nke a na-asọpụrụ: Akwụkwọ nke Unarius Academy of Science. Ndi Normans na Spiegel edeela ihe dika ederede 125, nke ndi UAS biputara. Ndị ode akwụkwọ na-ekwu na ha ga-enweta ihe ederede maka ederede sitere n'aka ndị nwere ọgụgụ isi dị elu bi na ụwa na-abụghị atọm, ụwa dị elu karịa. Normans na Spiegel ebipụtakwala ihe karịrị vidio vidio dị 100 ugbu a na igwe onyonyo 30 nke ọha na eze na-enweta.
Size nke Group: Unarius na-azọrọ inwe karịa ụmụ akwụkwọ 500,000 n'ụwa nile. Adam Parfrey, onye na-ede akwụkwọ na-enweghị onye nlekọta nke nyocha nke Unarius gụnyere nchọpụta nyocha, na-ekwu na ọnụ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ na-amụ akwụkwọ nwere ike ịbụ ihe na-erughị 1000. Ọ na-ekwu na nkwupụta na nzukọ a na-eme kwa izu n'isi ụlọ ọrụ dị na El Cajon na-esekarị ihe dịka ndị òtù 60 (Parfrey: 16).
Ariuslọ akwụkwọ sayensị nke Unarius bụ ụtụ isi, ntọala agụmakwụkwọ anaghị akwụ ụgwọ na El Cajon, California. Ebumnuche nke Academylọ Akwụkwọ ahụ bụ ịkụziri "nghọta ime mmụọ na mmekọrịta dị elu nke mmụọ dị ka iwu evolushọn nke mmadụ niile na-achọ iji nweta nzube nke ndụ." Okwu Unarius bu ihe omuma nke Universal Articulate Interdimensional Understanding of Science (Unarius Academy of Science: 4).
Ndị guzobere Academylọ akwụkwọ ahụ, Ernest na Ruth Norman (ndị isi ndị mmụọ ozi bụ Raphiel na Uriel, n'otu n'otu), zutere na Los Angeles na 1954 na mgbakọ psychics, ebe Ernest, onye ọkà mmụta sayensị, onye na-ede akwụkwọ na kọmputa, na clairvoyant, na-akụzi na "Inner Contact from Ihe Kachasi Elu ”(UAS: 6). Ọ bụ na mgbakọ ahụ ka ha tụụrụ ime ọrụ Unarọs. N'oge na-adịghị anya, ha guzobere Unarius Educational Foundation iji mụọ ọdịdị mmadụ, mmalite ime mmụọ ya, na njikọ ya na mbara igwe.
Afọ iri na asaa sochirinụ na-ewu afọ maka Unarius. N'oge a, ndị Norman na-esonye na mgbakọ na omume ime mmụọ ịgbasa ozi ha. Ha dekwara akwụkwọ iri abụọ, gụnyere Ernest's Voice of Venus, mmeghe nke nkwenkwe Unarius. Ndi Normen nwere ike ichikota obere ihe tupu ọnwụ Raphiel ma ọ bụ, na okwu Unarius, "ntụgharị ya na ụgbọ elu dị elu nke ụwa ọkụ" na 17 (UAS: 20).
Unarius ama anam ikpọ ukpụhọde ke Ernest ama akakpa. Ruth, onye ndu ohuru na-adọrọ adọrọ ma na-enwu ọkụ, nyere nnukwu ume na mkpali nye otu (Kossy). O guzobere isi ụlọ ọrụ Unarius na El Cajon, nke dị nso na San Diego, na 1972. Afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ mepụtara Center for New World Teaching maka ọmụmụ nke nkuzi Unarius na agụmakwụkwọ nke ụmụ akwụkwọ. O mekwara ka ọhụhụ nke otu ahụ bawanye site na ibipụta akwụkwọ na vidiyo banyere ozi gbasara sayensị dị n'etiti ndụ ọ natara n'aka ndị dị elu mgbe Ernest nwụsịrị.
Site na ọnwụ ya mgbe ọ dị afọ 93, Rut bipụtara banyere akwụkwọ 80 ma nyere aka mepụta vidiyo 100 na fim atọ zuru ezu (UAS: 6). Ọ na-ahụ maka ịtọ ntọala nke Unarius na Fort Lauderdale, Florida, Toronto, Vancouver, England, New Zealand, Nigeria, na Poland. Ruth bụ onye ndú kachasị elu n'inweta ọhụụ dị ukwuu maka Unarius (Kossy). A na-eme atụmatụ ebe ndị ọzọ Unarius na Madrid na Barcelona, ​​Spain, Turin na Rom, Italy, Romania, na Czech Republic.
Mgbe ọ nwụsịrị, Dr. Charles Spiegel (aka Antares) ghọrọ onye nduzi. Nwa akwukwo na onye nkuzi nke Unarius kemgbe 1960, Spiegel (nke amụrụ na 1921) edeela ma ọ bụ soro dee ihe karịrị akwụkwọ 30 maka agụmakwụkwọ, gụnyere m, Bonaparte, akụkọ ọdịnala banyere ndụ ya gara aga dịka Napoleon nke France. Antares nwetara ọkpụkpọ mbụ ya na Unarius mgbe ọ bụ nwa akwụkwọ na Mahadum Southern California na 1940s. Na-arụ ọrụ otu abalị na post office, ọ hụrụ ọhụụ nke nwanyị mara mma na-amụmụ ọnụ ọchị na ya. "Echefubeghi mmetụta m nwere na mmadụ hụrụ m n'anya," ka o kwuru (Rother: B1). Afọ ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị mgbe ọ zutere ndị Norman n'ụlọ ha na Glendale, ọ chọpụtara na ọhụụ ya bụ maka Rut. A kpaliri Spiegel na Unarius ma jeere Academylọ akwụkwọ ahụ ozi kemgbe ahụ.
Ndị mgbasa ozi malitere ikpuchi Unarius n'oge ngwụcha 1980s, ebe otu ahụ kwuru na ndị otu ya arịgoro n'ihe ruru 10,000 na arịrịọ ya abụrụla mba ụwa. Akwụkwọ ndị dị na mpaghara dị ka Los Angeles Times na San Diego Tribune malitere ibipụta akụkọ mkpụmkpụ na Unarius. Offọdụ n'ime akụkọ ndị a, dịka nke Mike Granberry "Otu Mmụọ Nsọ Na-atụgharị Anya na Ndụ Ndị Gara Aga maka Azịza," zutere iro nke otu ahụ. Academylọ akwụkwọ ahụ ghọrọ isiokwu nke nyocha nke ukwuu site na mgbasa ozi mgbe ogbugbu mmadụ nke otu ọnụ ụzọ Eluigwe dị na Machị 1997. Ndị otu ya siri ọnwụ na, na Unarius enweghị atụmatụ ọ bụla maka ogbugbu mmadụ, ma ọ bụ na ọ nweghị ọchịchọ apocalyptic ọzọ. N’ụzọ dị iche, ndị otu ahụ na-ekwusi ike mkpa ọ dị ịdị ndụ mgbe ndị Pleiadeans batara na 2001. Karịsịa, Unarius na-atụ anya ọbịbịa na ọbịbịa udo na agụmakwụkwọ zuru ụwa ọnụ n’ụwa (Noriyuki: A3).
Ariuslọ akwụkwọ sayensị nke Unarius na-akụzi na ọha mmadụ na-alaghachi kemgbe ọtụtụ narị puku afọ. N'ime oge a, mmadụ echefuola ọchịchọ ya maka nghọta ka ukwuu nke onwe, nghọta dị elu, na njikọ ime mmụọ na ụwa niile. Nke kachasị mkpa, mmadụ enwekwaghị mmekọrịta ime mmụọ ya, ọ kachasị, mmalite ime mmụọ ya (UAS: 13). Ndaghachi azụ a akpatawo agha, ịkpọasị, ịda ogbenye, na ọrịa n'oge na-adịghị anya. Ihe mepụtara na mgbọ nke ngwa agha atọm na 21st Century bụ “ahịhịa ikpeazụ” (Granberry: 5: 1).
Ndaghachi azụ nke ihe a kpọrọ mmadụ ga-abịa na njedebe ya na 2001. Dị ka onye nhazi ngalaba aha ya bụ Ruth Norman si kwuo, ndị ọzọ si n’ụwa ọzọ a na-akpọ Pleiadeans ga-abịa “wa wee bido “ịmaliteghachi mmụọ nke mmadụ. Dị ka ndị ozi ala ọzọ nke ụyọkọ kpakpando, ndị Pleiade ga-eweta ihe ọmụma nke ga-eme ka ihe a kpọrọ mmadụ nwee udo n'ikpeazụ ma kwụsị agha, ịda ogbenye, na ihe otiti ndị ọzọ. Mgbe ahụ ndị ozi ala ọzọ ahụ ga-akpọ ụwa òkù isonye na Interplanetary Confederation of Planets, nhazi nke mbara ala iri atọ na atọ na mbara igwe anyị. Willwa ga-abụ onye nke iri atọ na atọ na nke ikpeazụ (Rother: B1).
Ala ndị Pleiadeans
Na Ọktọba 12, 1984, Ruth natara ozi sitere n'aka Alta, onye ndu sayensị nke ụwa Vixall. E kwuru na Alta gwara ya na, na 2001, otu ụgbọ mmiri si na mbara ala Myton ga-abịa n'ụwa wee daa na Atlantis nke miri emi dị na Bermuda Triangle. N'ime afọ itoolu sochirinụ, ụgbọ mmiri iri atọ na otu ọzọ ga-esochi, nke ọ bụla na-ebu 1000 "Space Brothers" (Hoversten: 2A, Rother: B1). Ka ọ na-erule 2010, ụgbọ mmiri iri atọ na atọ ahụ ga-agbakọ na ala 32-acre (nke Unarius zụtara ha) na nso El Cajon, California. Mgbe ahụ, ụgbọ mmiri ahụ ga-etolite iji mepụta ogige ọhụrụ maka agụmakwụkwọ maka mmadụ niile n'isiokwu dịka njikọ mmadụ na mbara igwe na ngbanwe ime mmụọ nke mmadụ. Ndị nnọchi anya mbụ ga-abụ Pleiadeans si ụyọkọ Pleiadean nke mbara ala asaa na kpakpando Taurus (Hoversten: 73A, Rother: B2).
Unarius ji ọrụ Pleiadeans na ndị ọzọ “Space Brothers” tụnyere nke ndị ozi ala ọzọ ma ọ bụ Peace Corps bụ ọrụ nke ịhụnanya, udo, na agụmakwụkwọ. Ndị ozi ala ọzọ ahụ, ndị na-arụ ọrụ na “elu mmụọ” karịa mmadụ, ga-ebido “nnabata nke mmụọ,” na-akuziri ụmụ mmadụ ụzọ udo na nkwekọrịta ịdị n’udo. Ndabere nke ọha mmadụ ga-agbanwe: sayensị, gọọmentị, okpukpe, agụmakwụkwọ. Isi ngbanwe ga - eme na "psychodynamics" nke mmadụ niile. N'ihi mgbanwe a, a ga-amanye ụmụ mmadụ ịkwụsị agha niile, ịda ogbenye, ọrịa, mmetọ, na ihe otiti ndị ọzọ nke mmadụ (Alta: 11-14). Ozugbo nnabata ime mmụọ malitere, a ga-akpọ ụwa anyị ka anyị sonye na Njikọ Interplanetary na Space Brothers. Willwa ga-abụ nke iri atọ na atọ na nke ikpeazụ. Ruo mgbe ọ nwụrụ, Rut ga-abụ onye nnọchianya nke ụwa na nlọghachi mmụọ (Granberry: 5: 1).
Datebọchị 2001 maka mmalite nke ndị Pleiadeans abụghị nke mbụ Rut buru amụma. Na mbu, mbata a ga-eme na ụbọchị ụfọdụ na 1974. Unarius gara nnukwu ọrụ iji kwadebe maka ọdịda. Ruth, onye gaje ịbụ onye nnọchi anya ụwa na Pleiadeans, nyefere ọtụtụ ihe onwunwe ya "ụwa", ewezuga uwe mwụda mara mma nke ọ zụrụ iji yi mgbe ya na ndị Space Space na-eme njem. Spiegel, onye nke abụọ bụ onye na-elekọta ụlọ, gakwara gọọmentị etiti maka ịjụ ndị nchekwa obodo ka ha chebe ọdịda. Otú ọ dị, mgbe ụgbọ mmiri ọ bụla batara, ụbọchị ahụ ka emegharịrị maka 1975. Mgbe ọ bịarutere na 1975, Ruth buru amụma ụbọchị ọzọ na 1976. datebọchị 1976 gafere n'enweghị ihe ịga nke ọma. Wasbọchị amaliteghachiri mgbe Ruth natara ozi Lycenius. Diana Tumminia na-enye nkọwa zuru ezu banyere ụbọchị ọdịda dara ada na nkwadebe efu nke Unarius na "Otu Amụma Adịghị Ada Ada: Ebumnuche Nkọwa Na Otu Ndị Na-efegharị Mmiri."
Ọgwụ Nlekọta Ndụ na Oge Ọgwụ
Ozizi Unarius na-enye "ihe omumu nke ndu" nke sitere na echiche abuo abuo: nlọghari na ichota nke uche-aru. Iji zụlite nke ikpeazụ a, mmadụ ga-enwerịrị nghọta zuru oke banyere ọrụ ịlọ ụwa na mgbanwe ime mmụọ. Dị ka Unarius si kwuo, onye ọ bụla ebiwo ndụ ọtụtụ nde mmadụ n'ọtụtụ ebe dị iche iche, gụnyere ụwa na mbara ala ndị ọzọ dị n'ụyọkọ kpakpando anyị. Iji nwee ọganihu n'ụzọ ime mmụọ, onye ahụ aghaghị ịmara banyere ndụ ya gara aga na njikọ dị n'etiti ha (UAS: 13-14). Unarius kwenyere na ihe ọ bụla na-eme na ndụ bụ ihe si na ndụ ndị gara aga pụta. Ihe omume niile dị mma na nke na-adịghị mma, site na ọdachi ruo nnukwu ọdịmma, bụ nsonaazụ nke ndụ gara aga. Echiche a yikwara ka echiche karma n'okpukpe Buddha. Ihe niile na - eme maka ihe kpatara ya, na ndụ mmadụ niile dabere na ibe ya (UAS: 19-21).
Ruth Norman kwuru na ọ dịrị ndụ 55 na ụwa. N'oge ndụ ya gara aga, o kwuru na ya bụ Mary nke Bethany, Buddha, Mona Lisa, Socrates, Benjamin Franklin, Henry VIII, King Arthur, Charlemagne, Confucius, Queen Elizabeth I, Peter the Great, Johannes Kepler, King Poseid of Atlantis , na ndị ọzọ. Ernest Norman kwuru na ya bụ Jizọs onye Nazaret (ọ ga-abụ na o nwere ihe obe a na-akpọgide ya n’elu obe iji gosi ya), Osiris, na Setan; o mechara kwụsị ọchịchọ Setan site n'ịgbaso omume Unarius. N’atughi anya, Charles Spiegel, onye isi oru ugbu a, nekwu na ha aburu Napoleon na Pontius Pilato. onye isi ndị Rome nyere iwu ka e gbuo Jizọs (Kossy).
Ozugbo mmadu matara banyere ndu ya gara aga, o nwere ike bido dozie nsogbu a na - edozighi site na ndu ya gara aga. Nsogbu ndụ gara aga nke ndị òtù Unarius na-adịgasị iche iche. N'ime ndụ ha gara aga, ụfọdụ bụ ndị ndu ndu nwere mmụọ ọchịchị na aka ike; ndị ọzọ na-edo onwe ha n'okpuru ma ọ bụ na-eti ihe n'ụzọ na-adịghị mma (Noriyuki: A3). Ernest Norman na Charles Spiegel bụ Setan na Pontius Pilato. Onye ọ bụla meriri nsogbu ya site na ịgbaso ihe Unarius na-akpọ Ọgwụ Ndụ Ndụ Gara Aga. Ndụ Ndụ Ochie gara aga na-enyere ụmụ akwụkwọ aka ịghọta ọdịdị "dị n'etiti" ọdịdị nke ịdị adị ha. Okwu interdimensional na-ezo aka na njikọ dị n’etiti oge gara aga, ugbu a na ọdịnihu. Ozugbo mmadu matara ihe gara aga ya na njikọ ya na ugbu a, ọ nwere ike ilepụ anya n'ọdịnihu (UAS: 13-14).
N'ihi ya, a na-akpọte onye ahụ na mbido ime mmụọ ya. Ugbu a ọ nwere ike ịmalite ịmalite ọganihu rue ime mmụọ ka ukwuu, ma ọ bụ "ịdị elu dị elu," dị ka Unarius kpọrọ ya. Site na ịgbaso ọgwụgwọ ndụ gara aga, onye ahụ nwere ike ịgbasawanye nghọta ya ma ghọta eziokwu dị n'etiti mbara igwe: na n'ụyọkọ kpakpando anyị, na ọtụtụ nde mbara ala ndị ọzọ, ọtụtụ ijeri ndị mmụọ ndị ọzọ nwere ọgụgụ isi na-arụkwa ọrụ na mmalite nke mmụọ ha. Ọtụtụ n'ime "Space Brothers" nọ n'ụgbọ elu ime mmụọ dị elu karịa ụmụ mmadụ. Yabụ, ụmụ mmadụ nọ n'ụwa nwere ike ịrịọ Space Brothers maka enyemaka na mbilite mmụọ ha (Granberry: 5: 1).
Ndị òtù Unarius na ndị Space Space, na-ebi na mbara ala dị ka Vixall na Myton na-enwe mmekọrịta mgbe niile. Ndị Norman nwere nkwukọrịta kachasị mma na ha, mana ndị otu ọzọ akpọrọ "kọntaktị" na-ekwukwa okwu oge niile ma na-ebufe ozi nke Space Brothers. Ọtụtụ ozi na-enye ndụmọdụ banyere evolushọn ime mmụọ, ma ndị ọzọ gbasara isiokwu ndị ọzọ. Site n'enyemaka nke Space Brothers, ụmụ akwụkwọ na-enwe ọganihu ka mma na nzụlite ha. Ya mere, a na-agwọ ọrịa site n'ime, ọ bụ ezie na enyemaka sitere na ndị mmadụ na-adịghị ndụ (Granberry: 5: 1).
Ndụ, Ọnwụ, na Nzube Na-enweghị Atụ nke Ihe Ọkpụkpụ Egwu
Interdimensional sayensị na-akọwakwa dichotomy nke ndụ na ọnwụ dị ka Unarius. Ọnwụ adịghị egosi njedebe nke ịdị adị mmadụ. Kama nke ahụ, ọ bụ naanị ihe na-eme ka ịdị adị elu nke ịdị adị. Ke uwụtn̄kpọ, ke ini Ernest akakpade ke 1971, enye ama akabade ata idaha edidu ke ekondo en̄wen ke ebiet emi enye edide Mars. Taa, afọ iri abụọ na asaa mgbe ọ nwụsịrị, ọ ka nwere isi ụlọ ọrụ ya na Mars. Ọ na-agwa Ruth okwu mgbe niile mgbe ọ ka dị ndụ, ya na ndị òtù Unarius ndị ọzọ na-ekwurịta okwu mgbe niile (Rother: B1). Nye ndị Unarians, ọnwụ bụ oge maka mmalite dịwanye elu, ikekwe na mbara ụwa ọzọ. N'ime ọtụtụ narị puku afọ, ndị mmadụ n'otu n'otu na-ebi na ọtụtụ puku mbara ala dị iche iche na ụyọkọ kpakpando dị iche iche (Kossy). Ebe obu na ntoputa nke mo nke madu bu ihe ebighebi, okirikiri ndu, onwu na imeghari na adi niru.
Site na ịga n'ihu n'ọganihu nke mmụọ ya, onye ahụ nwere ike iru ihe mgbaru ọsọ kasịnụ, "nnwere onwe mmụọ." Na ọkwa nke mmadụ, ntọhapụ nke mmụọ gụnyere udo nke uche, anwụghị anwụ nke mkpụrụ obi, na ịhapụ nsogbu uche na nke mmetụta uche nke ụwa. Na ọkwa sara mbara, onye ọ bụla na-amalite nghọta nke Infinity Concepts of Cosmic Creation. Okwu Unarius maka Chineke. Dị ka Unarius si kwuo, Infinity Concept of Cosmic Creation bụ otu ihe na ume. Ọ bi n’ime mmadụ ọ bụla; mgbe onye ahu mutara banyere “chi-onwe” ya ma wepu iche na mbara igwe, ochoputara ihe di elu nke ime mmuo ya. Ya mere, enweghi ike inwu onwu, nani oganihu nke omuma (UAS: 19-21).
Unarius Dị Ka Okpukpe
Unarius na-agọnahụ mgbe nile na ọ bụ okpukpe, ma ọ bụ ọbụna nkà ihe ọmụma. Dị ka onye nduzi Spiegel si kwuo:
Ozizi Unarius abughi ihe omuma; ọ bụ usoro ịdọ aka na ntị iji nweta nghọta nke ndụ n'onwe ya. Uzo nghota di otua, ka aga enweta, aghagh ịdabere na ntoala ndi nto ala nke ndu ji esi oru ya. Unarius bụ Science nke Ndụ, anaghị akụzi dị ka okpukpe ma ọ bụ ọrụ dị ka okpukpe. Onye obula aghaghi imuta ihe omuma nke uche ya na uzo ya. Mgbe ahụ, mmadụ na-amalite ịmatakwu banyere ọrụ uche ya na Incepts Incept of Cosmic Creation na nzube mmadụ na ọnọdụ ya n’eluigwe.
Unarius abụghị okpukpe n'ihi na ọ bụ iwu ọgwụ maka ịgwọ onwe gị site na ememe nke nkuzi nkwenkwe… Ozizi nke nzukọ a bụ ịtọhapụ onye ahụ na nkwenkwe ochie.
Unarius ejirila aka ike gọnarị aro ọ bụla banyere ọnọdụ okpukpe kemgbe oge ndị na-abụghị ndị ọzọ malitere ịjụ otu a ajụjụ banyere ntọala okpukpe ya. Unarius na-ekwu, dịka ọmụmaatụ, na a pụghị ile ya anya dị ka okpukpe n'ihi na ọtụtụ nkwenkwe ya enweghị ihe ha kwekọrịtara na nkwenkwe nke okpukpe ọ bụla guzobere (Ellwood: 41: 398). Ọ na-azọrọ na ọ dabeere kpam kpam na sayensị, n'ihi ya kwa, ọ “gabigara ókè okpukpe nwere.” Dị ka ihe atụ, nkà mmụta sayensị dị ka ihe ọ bụla a na-ahụ n’okpukpe dị iche iche n’ihi na ọ na-akọwa ihe gara aga, ugbu a na ọdịnihu; n'adịghị ka okpukpe, nkọwa ya anaghị akwụsị mgbe ọ nwụrụ (UAS: 22). Naanị ọdịnala okpukpe bụbu nke Unarius jirila tụnyere onwe ya bụ okpukpe Buddha, nke nwere “ebumnuche na-agbanwe agbanwe” nke Unarius.
Otú ọ dị, ọtụtụ àgwà ndị Unarius na-egosi na Unarius bụ okpukpe (Tumminia: 157). Dị ka ndị ọkà mmụta mmekọrịta ọha na eze bụ Rodney Stark na William Bainbridge si kwuo, okpukpe bụ usoro nke ndị na-akwụ ụgwọ zuru oke na-adabere n'echiche ndị sitere n'okike. Ndị na-akwụ ụgwọ bụ "ụgwọ ọrụ nke ụgwọ ọrụ dịka nkọwa ndị na-anaghị adaba ngwa ngwa nyocha." Echiche dị iche iche dị iche iche, na-esote, bụ ihe yiri nke ahụ, na isi, agaghị ekwe omume.
A na-ekwuputa ihe nkwuputa a na-enweghị ikike na ọtụtụ nkwenye na omume Unarius. Dịka ọmụmaatụ, echiche nke Space Brothers na amụma nke ọbịbịa ha bụ eziokwu nke bụ onye na-akwụ ụgwọ na echiche efu. Brothersdị adị nke Space Space bụ isi n'echiche nke ike mmụọ na-agaghị ekwe omume site na akaebe doro anya (Stark na Bainbridge). Amụma nke ọbịbịa nke Space Brothers, n'ụzọ dị iche, bụ onye na-akwụ ụgwọ; ọ bụ nkwa ụgwọ ọrụ maka mbọ Unarian n'ụwa. E jiri ya tụnyere ụmụ mmadụ, ndị Space Space nwere ọgụgụ isi na ike ka elu n'ihe gbasara mbido ime mmụọ ha. Yabụ, enwere ikike, na-emegide ọnụ ọgụgụ, ọdịiche dị n’etiti ụmụnna Space na ụmụ mmadụ. N'okwu sara mbara, ọbịbịa na-ekwe nkwa njikọ nke ndị Unarians na ndị ọkachamara galactic ha.
Dị ka ụfọdụ okpukpe ndị dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ, Unarius kwenyere na ịlọ ụwa, njikọ dị n'etiti ndụ, na ike ịmata ndụ ndị gara aga. Echiche Unarius banyere njikọ dị n'etiti ndụ nwere myirịta na echiche nke karma na Buddha, ọ bụ ezie na ha dị iche n'akụkụ ụfọdụ. Dị ka Unarius si kwuo, ihe ọ bụla na ndụ na-eme n'ihi ihe kpatara ndụ ndị gara aga (UAS: 19-21). Onye obula nwere ike ichota ndu ya site na ndu ya n'oge gara aga. N'ihi ya, usoro ọgwụgwọ anaghị ejedebe na ndụ ugbu a; ọ na-agafe oge ndụ ọ bụla mmadụ nwere ike icheta, ma eleghịkwa anya oge ndụ (Noriyuki: A3). Ndụ gara aga, ikekwe usoro ọgwụgwọ Unarius, nyeere Ernest aka imeri oge gara aga dịka Setan (Granberry: 5: 1). Echiche nke Setan na, n'ozuzu ya, nke ezi na ihe ọjọọ na-egosi mmetụta dị egwu nke echiche okpukpe ọdịda anyanwụ na nkwenkwe Unarius.
Unarius na-adaberekwa na omume ndị yiri okpukpe. Channeling bu ihe kacha mma. Ruo mgbe ọ nwụrụ, Ernest bụ onye mbụ na-anata ozi ndị mba ọzọ. Ke enye ama akakpa, Ruth ama ọtọn̄ọ ndibọ (Tumminia: 157). O natara ozi karia karia Ernest, n'oge na-adịghị anya ọ na-ede akwụkwọ, na-eme vidiyo, ma na-ebu amụma banyere ndị bịara abịa dabere na ozi. O yiri ka enwere ọtụtụ ọhụụ maka Unarius, karịsịa mgbe ọnwụ Ruth (Hoversten: 2A). Channeling bụ omume nke ụdị dịgasị iche iche nke okpukpe ọhụrụ na omenala okpukpe ochie. Unarius nwekwara ememe ndị ọzọ na-egosi okpukpe (Tumminia: 157). Ugboro ugboro kwa afọ, Ụlọ akwụkwọ ahụ nwere obere ọhụụ na mgbakọ ndị pụrụ iche, ihe kachasị mkpa bụ Interplanetary Conclave nke Ìhè, nke a na-eme na Oketị ma na-adọta n'etiti ndị ọbịa 50 na 100.
Fọdụ n’ime ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ nke na-egosi ọchịchọ okpukpe Unarọn bụ akwụkwọ nsọ ya. Na ngụkọta, ndị Normans na Spiegel edeela ihe ruru ederede 125 ndị ​​na-eje ozi dị ka akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke otu ahụ. Mkpokọta ya karịrị nke Bible. Ihe odide a na-enye ọtụtụ ozi, site na akụkọ banyere ndụ ndị gara aga ruo na ndụmọdụ na ndụ na amụma banyere ọdịnihu. Tinyere vidio na ihe ọmụma ndị ọzọ nke Unarius mepụtara, o doro anya na ihe odide ndị a gụnyere usoro nkwenkwe na omume nke Unarius ma bụrụ ndị ndu maka ndị mmadụ n'otu n'otu (Tumminia na Kirkpatrick: 94). Dị ka o kwesịrị ịdị, akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ jupụtara na ozi nke na-egosi okpukpe. Ezigbo ihe atụ bụ amụma nke ọbịbịa nke Space Brothers dị ka Rut buru n'amụma. Amụma a dị ka nkọwa Stark na Bainbridge nke ndị na-akwụ ụgwọ na echiche ndị sitere na mmụọ.
Mmezu nke omume na nkwenkwe Unarius, gụnyere emume, ederede dị nsọ, nkwenye na ihe ndị na-abụghị eziokwu, na amụma, na-enye usoro pụtara na ebumnuche (Tumminia na Kirkpatrick: 94-96). Prinkpụrụ ndị dị ka ọgwụgwọ ndụ gara aga, sayensị interdimensional na sayensị nke Ndụ niile na-enye ụmụ akwụkwọ Unarius ihe iji ghọta ọdịdị mmadụ n'oge gara aga, ugbu a na ọdịnihu. Na nkenke, nzube nke ịdị adị mmadụ bụ ịmalite n'ụzọ ime mmụọ, si otú a na-aga n'ihu na nke ukwuu nke ime mmụọ ma mechaa nwee nghọta nke Infinity Concept of Cosmic Creation. Usoro nkwenkwe nke Unarius nwere ike ikwenye, kọwaa, ma ọ bụ kpochapụ ihe niile, wee mejupụta ajụjụ niile nke pụtara maka ndị Unarians. Usoro nkwenkwe nke Unarius dị iche na usoro nkwenkwe nke ọtụtụ okpukpe guzobere. Na ngwụcha, agbanyeghị, ọdịiche ndị a na-adịkarị n'elu ala. Na nkwenkwe nkwenkwe, ihe ọ pụtara, na omume, Unarius na-akọwa onwe ya dịka okpukperechi.
Mmekọrịta dị n'etiti Ernest na Ruth gbanwere nke ukwuu n'oge afọ 40 jikọtara ha duuru Unarius. Site na echiche nke Unarius ruo mgbe Ernest nwụrụ na 1971, ọ bụ onye nwere ọgụgụ isi, onye isi ala, wee si otú a bụrụ onye isi (Kossy). Otú ọ dị, mgbe ọ nwụsịrị, ọ bụghị nanị na Rut malitere idu ndú, kama ọ gbanwere ya n'ụzọ dị ukwuu. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ozi ọ natara na ọrụ ọ na-arụ mgbe niile nyeere Unarius aka ngwa ngwa karịa ka ọ dị n'okpuru nduzi Ernest. Site n'ọnwụ ya na 1994, Unarius emezuola nnukwu ọhụụ na ọhụụ (Kossy). Otú ọ dị, mgbe ọnwụ ya gasịrị, ajụjụ bịara banyere onye ndú nke Unarius.
O doro anya na onye ga-anọchi Rut Charles Spiegel (Antares) bụ onye na-atụ egwu okpukpe Unarian kemgbe mmalite otu. Ọ bụ nwa akwụkwọ na prọfesọ na andlọ akwụkwọ na onye aka nri Ruth. N'ime oge 1970 na 80s, mgbe Rut nọ na-ezipụ ozi, na-ede akwụkwọ, ma na-ahụkarị Unarius na onwe ya, Spiegel ji ọrụ dị ukwuu maka ime ka ihe rụọ ọrụ (Rother: B1). Ahụmahụ Spiegel na-eduga Unarius na-egosi n'ezie na ya nwere ike iduga Unarius site n'echiche nchịkwa.
Otú ọ dị, ọ pụrụ isiri ya ike nke ukwuu ikweta inwe ụdị ikike Rut nwere. N'oge ya dị ka onye ndu, Rut rụzuru Unarius dị ukwuu. O nwere ọtụtụ njirimara nke njiri mara nke ọha: ọgụgụ isi, ịnụ ọkụ n'obi, na agwa ziri ezi, na mgbakwunye na ịmụmụ ọnụ ọchị na ihu ọchị. Tupu ya anwụọ, o chere na ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha debe "Space Cadillac" ọ hụrụ n'anya; o kwere nkwa na ya ga-alaghachi na ndị Pleiade iji kwuo ya na 2001 (Tumminia: 157). Rut rụkwara ezigbo ọrụ iji hazie otu ahụ tupu ọnwụ ya. O weputara Spiegel dika onye ozo ya ma weputa otutu ebumnuche ka o soro; a haziri isi ụlọ ọrụ dị na El Cajon, nwere ọnọdụ nhazi na arụmọrụ kpọmkwem; na e hiwere ebe ndị ọzọ na Canada, England, New Zealand, Poland, na Nigeria.
Ihe kachasị mkpa nke Ruth hapụrụ Unarius bụ amụma nke ọbịbịa nke Space Brothers na 2001. Dịka a na-esite n'aka Lycenius, o gosipụtara ọbịbịa nke ọma, yana ntuziaka maka etu esi edozi ọdịda, ihe ị ga-eme ma emechaa, na ọrụ nke Unarius na ime ihe omume (Tumminia: 157). N'ikpeazụ, ihe ga-esi na amụma a pụta, karịa Spiegel, ga-ekpebi ndụ Unarius. Mgbe ọbịbịa na-eru nso, Unarius amalitela ịkwadebe, na-eme ihe siri ike iji hụ na mbata ahụ gara nke ọma. Ruo 2001, Unarius ga-adabere kpamkpam n'ihe nketa Rut. Ọ bụrụ na ọbịbịa ahụ emeghị, Spiegel nwere ike izute nnukwu nsogbu na ndu Unarius na 25 afọ, ebe ọ bụ na ọdịda nke etiti afọ ndị 1970. Dabere na Caitlin Rother, Spiegel kwuru na ọ bụrụ na ndị Space Brothers abịaghị, ọ ga-abụ ihe na-egosi na ụmụ mmadụ adịghị njikere. Ndụ nke Unarius na-adaberekarị na nbata Space Brothers na 2001.
Alta nke mbara igwe Vixall (dịka Ruth Norman dere). ND. Onye na-eme ihe banyere Extraterrestrial. El Cajon, CA: Unarius Academy of Science Publishing. 1-14.
Balch, R., Farnsworth, G., na Wilkins, S. 1983. “Mgbe bọmbụ ndị ahụ na-ada.” Echiche nke mmekọrịta ọha na eze. 26: 137-58.
Granberị, Mike. 1986. "Otu Mmụọ na-ebi n'ime ndụ ndị gara aga maka azịza." Oge Los Angeles. Ọnwa Itolu 29: 5: 1.
Hoversten, Paul. 1997. "N'afọ 2000 Dị Nso, Ndị Nkwere UFO Na-apụ." USA Taa. Machị 31: 2A.
Kossy, Diane. 1990. "Unarius Academy nke Science." Akwụkwọ akụkọ Zontar. Dị ka e zoro aka na November 22, 1998, na http://www.teleport.com/~dkossy/unarius.html.
Ellwood, Robert. 1995. "UFO Mmeghari Okpukpe." Na Okpukpe Ndị Ọzọ nke America. Timothy Miller, ed. Albany, NY: Mahadum University nke New York Press. 41: peeji nke 393-399.
Noriyuki, Duane. 1997. "Age nke Unarius." Oge Los Angeles. Eprel 7: A3.
Norman, Ruth, na Spiegel, Charles. 1993. Oge Ikpeazụ Ikpeazụ. El Cajon, CA: Unarius Academy of Science Publications.
Parfrey, Adam. 1995. "Chi Dị Iche Iche Ga-abụ Onye Uche: Oge Ikpeazụ nke Unarius." Na Okpukpe Okpukpe. Portland, OR: Felọ Feral. peeji nke 13-32.
Rother, Caitlin. 1994. "Star nke Unarius: Spiegel Na-echere Saucers." San Diego Tribune. October 13: B1.
Spiegel, Louis. 1985. M, Bonaparte: A na-akpọ Autobiography. El Cajon, CA: Unarius Publishers.
Stark, Rodney, na Bainbridge, William. 1979. “Of Churches, Sects, and Cults: Preliminary Concepts for theory of Movements okpukpe.” Akwụkwọ akụkọ maka Ọmụmụ Sayensị nke Okpukpe. 18 (2): 117-133.
Tumminia, Diana. 1998. "Otu Amụma Adịghị Ada Ada: Ebumnuche Ntugharị Na Otu Ndị Na-efegharị Mmiri." Sociology nke Okpukpe. 59/2: 157 (Oge ọkọchị).
Tumminia, Diane, na Kirkpatrick, RG 1995. "Unarius: Ihe Omume Na-adịghị Anya nke Ftù Ndị Na-efegharị Ahụ Ike nke America." Na Chi Dịwo Ala. James R. Lewis, ed. Albany, NY: Mahadum University nke New York Press. 4: peeji nke 85-104.
Unarius Academy of Science. 1997. Unarius Ìhè. El Cajon, CA: UAS Na-ekwusara. pp.5-31.
Adreesị ozi-e Unarius: uriel@unarius.org
Ekwentị: (619) 444-7062
Tel. na New Zealand: 801-7503
Nwa nwa Adirije
Ross Hoffman kere ya
A gbanwere ya ozugbo: 07 / 25 / 01